नायक भएर कसैको छोरीको पैसा र बै,शमा म,स्ती गर्ने ? युवती पनि त्यस्तै (भिडियो सहित)
Homeसमाचारनायक भएर कसैको छोरीको पैसा र बै,शमा म,स्ती गर्ने ? युवती पनि त्यस्तै (भिडियो सहित)
April 17, 2021 admin समाचार 6240
नायक किशोर खतिवडालाई आफ्नो श्रीमान दा’वी गरेकी महिला र किशोर आमने सा’मने भएका छन् । चलचित्र रावण मार्फत नेपाली रजतपटमा प्रवे’श गरेका कलाकार किशोर खतिवडा माथि एक महिलाले श्रीमान दा’वी गर्दै अहिले धो का दिएको बता’एकी छन् । उनले मिडियामा सो कुरा सार्व’जनिक गरेपछि किशोर पनि सार्व’जनिक भएका छन् ।
कलाकार खति’वडाले बिगत ३ वर्षदेखि बिवाहको आश्वासन दिएर आफुलाई प्र’योग गरेर लाखौं रकम समेत लगेको आरोप लक्ष्मी गदालले लगाएकी छन् । तीन वर्ष सम्म श्रीमान श्रीमतीजस्तै बसेका उनीह’रुबीच सम्बन्धमा स_मस्या आएको छ । भोजपुर घर बताउने लक्ष्मी गदालले खतिवडालाई श्रीमान दा’वी गर्दै आफुलाई अन्या’य गरेको आ’रोप लगाएकी हुन् ।
उनले यस्तो आ’रोप लर्गापछि खण्डन गर्न उनी पनि मिडियामा सार्व’जनिक भएका हुन् । गदालका अनुसार नयाँ बानेश्व’रको एक जिम हलमा जाँदा खतिवडासँग उनको भेट भएको बताए’की छन् । खतिवडाले आफैं बोलाएको र मोबा’इल नम्बर मागेपछि दिएको उनले ब’ताइन् । त्यस पछि उनले विभिन्न बहानामा पैसा माग्न लागे । उनले देशको एउटा चिनिएको क’लाकार देलान् नि त भनेर आफुले दिइरहे’को बताइन् । यही बिषयलाई लिएर नि’र्देशक हरी उदासिले आफ्नो बिचार राखेका छन । इताजा खबरबाट
आज राति बाट डीभी आवेदन खुल्दै कसरी भर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्
October 7, 2020 admin समाचार 11361
२०२२ का लागि अमे’रिकी सर’कारको डाइभ’र्सिटी भिसा (डीभी) बुधबार रा’तिबाट खुल्ने भएको छ । काठमाडौं’स्थित अमेरिकी दूतावा’सले नेपाली स’यम अनु’सार बुधबार राती ९ बजेर ४५ मिनेट’पछि आवेदन खुला गरिने जना’एको छ । अमे’रिकाले हरेक वर्ष
घट्यो खाने तेलको मुल्य, कति पुग्यो प्रतिलिटर ? थाहा पाउनुहोस्
June 8, 2022 admin समाचार 3005
भारतमा घट्यो तेलको मूल्य के अब नेपालमा पनि घट्ला। ? भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ । इण्डो`नेशियाबाट पाम तेल आयात सुरू हुन थाले पछि भारतमा खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको हो ।खानेतेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २०
शेरधन दम्प’त्तिलाई प्रधानमन्त्रीको शुभकामना
January 25, 2021 admin समाचार 6641
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई दम्प’त्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभकाम’ना दिएका छन् । आइतबार ४९ वर्षको उमेरमा मुख्यमन्त्री राईले २३ वर्षीया मोडल जाङमु शेर्पासँग विवाह गरेपछि आयोजित रिसेप्सन पार्टीमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले शुभका’मना दिएका